Sidee Kamid Tahay Shirkad Ku Quusho Warbaahinta Bulshada? | Martech Zone
Khamiis, Agoosto 21, 2008 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Tani waa qaybtii 2aad ee 3 qaybood oo taxane ah. Qaybta 1aad waxay ahayd Goorma ayey tahay inay shirkaddu ku dhex daadato Baraha Bulshada? Waan ka xumahay dib u dhaca ku yimid boostadan, waxay ahayd culeys toddobaad ah shaqada - 3 mashruuc oo soo dhowaanaya, midkoodna sannad ka badan!
Sidoo kale waan hakaday tan iyo markii ay jireen xoogaa dood weyn oo kusaabsan boostada koowaad, gaar ahaan a boostada ka socota dadka ku jira Deep Tech Dive:
Laakiin waxaan su'aalayaa cadeynta Doug ee ah inaad marka hore ka qeyb qaadato dhamaan hogaamiyaasha shirkadaada? kuwa iska leh istiraatiijiyadda shirkadda.? Laga yaabee Indianapolis inay ku taal meera kale (Jeff, waxaad ka timid Kentucky, maxaad u maleyneysaa?) Halka kooxda fulinta ay haysato waqti iyo faham ku saabsan warbaahinta bulshada si loo gaaro kumbaya. Laakiin halkan, habka ugu dhakhsaha badan ee loo dilo hindisaha cusub ee isgaarsiinta ayaa ah in lagu haysto afduub heer sare ah oo la isku raacsan yahay. Maaha in oggolaanshaha hoggaanku aanu muhiim ahayn, laakiin inay ku dhowdahay suurtagal la'aan in la gaaro, gaar ahaan KA HOR inta aanad muujin karin wax ROI ah oo la taaban karo.
Waxaan u maleynayaa inaan seegay calaamadda ku taal midkan qoraalkeyga: Kama walwalsanahay inaan yeesho go'aan la isku raacsan yahay oo ah heerka guddiga. Waxa aan dhab ahaan ka walaacsanahay ayaa ah ka caawinta hoggaanka shirkadda inay aqoonsadaan fursadaha iyo dabinnada ka dhalan kara iyada oo la furo ganacsigaaga illaa istiraatiijiyaddan. Qoraaga oo sii hadlaya ayaa yidhi:
Istaraatiijiyad-yar-yar ayaa mararka qaarkood si fiican u shaqeysa, dhowr siyaabood. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa hal qoraa ganacsi leh, qalab aad qaali u ah, iyo hal dhibaato isgaarsiineed oo aad cabbiri karto. Waxaa laga yaabaa inay aasaas u tahay sidii taraafikyo badan looga heli lahaa websaydhkaaga. Ama kor u qaadista wacyiga qalabka taageerada cusub iyo barnaamijyada. Ama ballaadhinta xiisaha macaamiisha adoo u sheegaya sheekooyin xiiso leh oo ku saabsan sida dadka dhabta ahi u isticmaalayaan alaabadaada ama adeegyadaada.
In kasta oo aan ku raacsanahay in tani ay shirkaddaada siin doonto bilow deg-deg ah oo aan ku filnayn waqti aad ugu tagto 'guddiga godka madow', waxaan arkay qaabkani inuu leeyahay natiijooyin aad u fiican oo halaag leh. Waxaa laga yaabaa in tusaalaha ugu fiican ee aan ku arkay istiraatiijiyadani uu ahaa saaxiib Chris BaggottBlog 'on Suuqgeyn Istaraatiijiyadeed ugu Wanaagsan. Dabcan, Chris wuxuu ka faa'iideystay inuu noqdo milkiilaha iyo Sarkaalka Suuqgeynta ee shirkadda ExactTarget, sidaa darteed waxyar bay ka fududeyd in dib loo boodo markaas.
Su'aashu ma ahan in blog-ka Chris uu saameyn yeeshay. Waxay yeelatay saameyn aan caadi aheyn! Su’aashu waxay tahay miyay gaadhay iyo inkale inay gaadhay awooddeedii buuxda oo ay yeelatay saamayn ganacsi, urur oo dhan, in ay waayeen leeyihiin. Chris wuu baxay Xaqiiqda si ay u bilaabaan Compendium Blogware (afeef: Waxaan Chris ka caawiyay inuu horumariyo fikradda asalka ah) maxaa yeelay isaguna wuu ku tala galay sidoo kale!
Chris wuxuu bartay xadhkaha wax lagu qoro dhowrka sano ee loo yaqaan 'Typepad'. Waqtiga Chris uu ku ogaadey kartida baloogyada Suuqgeynta Mashiinka Raadinta, isdhexgalka, iwm., Waa goor dambe in laga guuro Nooc oo aad uga faa'iideysato barta wax lagu qoro. Meel walba dib ayuu ugala xirnaa (wali wuu # 1 u yahay) Suuqgeyn Istaraatiijiyadeed ugu Wanaagsan“. Waxaa jiray dhowr iyo toban erey oo kale oo Chris uu jeclaan lahaa in lala xiriiriyo jiilka hogaanka ee ExactTarget, laakiin ma uusan heysan qaab uu ku fahmo maalinta uu booday oo bilaabay inuu wax qoro. Wuxuu sidoo kale jeclaan lahaa inuu dad kale ku yeesho barta sidoo kale - inuu sii xoojiyo saameynta.
Ayaa kuu Sheegaya Sidee?
Tani waa sababta aan ugu ahay qof si weyn ugu ololeeya raadinta la-taliyayaasha Warbaahinta Bulshada ee ku habboon ganacsigaaga. La-taliye weyn ayaa dib u eegi kara qalabkaaga, ganacsigaaga oo wuxuu heli karaa qalabka ku habboon ee ku habboon istiraatiijiyaddaada. La-taliyayaasha warbaahinta bulshada ee maxalliga ah sidoo kale way ka warqabaan muuqaalka warbaahinta bulshada - wayna kaa caawin karaan halkaas oo inaad fuliso istiraatiijiyaddaada, maahan oo keliya sida.
Ninkaaga IT ayaa yeelan kara WordPress soconaya 5 daqiiqo (caanka ah 1-guji rakib). Taasi macnaheedu maahan inuu garanayo sida loo dhiso mawduucaaga loogu talagalay gurguurta mashiinka raadinta? Miyuu yaqaanaa sida loo dejiyo permalinks iyo cinwaanada bogga saameynta ugu badan? Miyuu ogyahay waxyaabaha ay tahay inay lahaadaan? Maya, isagu ma yeesho - haddii kale wuxuu socodsiin lahaa bog guuleysi leh, oo hadlaya, iyo la-talin dhinaca ah. Tani waa mid ka mid ah meelaha aad gabi ahaanba ku khiyaanayn karto ruuxa isha furan.
Waan jeclahay Source Furan! Waan jeclahay WordPress! Miyaan u adeegsan lahaa si aan ugu bilaabo istiraatiijiyad dhammaystiran warbaahinta bulshada shirkad? Maya WordPress waa nidaam maareynta maareynta maareynta qoraaga, mana aha nidaam maareynta maareynta waxyaabaha ku saleysan shirkadda.
Waa Kuma Codka Shirkaddaadu?
Badanaa, waaxdaada suuqgeynta maahan ilahaaga ugu fiican ee lagu fulinayo istiraatiijiyadda warbaahinta bulshada. Suuqyayaashu waa farabadan xiise badan. Waxaan ka fikirnaa cagahayaga oo waxaan badanaaba maskaxda ku haynaa istiraatiijiyadda guud ee sumcadda markaynu hadlayno. Haddii aad gasho shabakad bulsheed oo aad bilowdo lling lling lingo taasi badanaa waa loogu talagalay BS Bingo, waa otomaatig F. Haddii aan lagu weydiisan inaad baxdo, diyaar u noqo in shirkaddaada si cad loo canaanto xadgudubkeeda mabda'a muhiimka ah ee warbaahinta bulshada - aaminaadda.
Waxaa jira dad ka tirsan ururkaaga hadda oo dhisay kalsooni, awood, iyo shabakad weyn oo ku dhex jirta warshadooda. Kuwani waa isku xirayaasha iyo saamileyaasha aad u baahan tahay inaad ku qorto istiraatiijiyaddaada!
Mid Kaliya Ha Cunin!
Qodobka ugu dambeeya ee sida loo bilaabo. Fadlan kalsoonidaada oo dhan ha saarin hal 'khabiir'. Khabiirku waa erey qaraabo ah, gaar ahaan marka la eego warbaahinta bulshada. Shirkadaha ayaa kaliya ka xoqaya dusha sare xilligan sida looga faa'iideysto qalabkan cajiibka ah si loo dhiso xiriiro iyo helitaan shirkadooda. Ka taxaddar ereyada xad-dhaafka ah sida marna, dhammaantood, cidna, qof walba… istiraatiijiyadda aanad sharad ku dhigin waxaa laga yaabaa inay ahayd tii adiga kuguuleysay guushaada ugu weyn.
Raadi waxoogaa lataliyeyaal ah oo warbaahinta bulshada ah, dadyow fahmi kara ganacsigaaga, warshadahaaga, istaraatiijiyadaha suuqgeyntaada, korsashadaada tikniyoolajiyadda iyo yaa wax ku bari kara kooxdaada hoggaanka qaabkan xiisaha leh ee cusub.
15, 2008 at 3: 41 PM
Doug, waan ku faraxsanahay inaan aragno qayb kale oo taxanahaaga ah. Waad ku mahadsantahay wax ka qabashada walaaca aan ka qabno isku raacsanaanta maamulka. Waxaan ku raacsanahay in khubaradu ay muhiim u yihiin ka fogaanshaha miinooyinka dhulka lagu aaso iyo in la ogaado fursadaha. Waa mawduuc weyn oo loogu talagalay dadkeenna tiknoolajiyada qotada dheer, sidaa darteed waan nahay sii wadida tabinta taxanaheena ka badan McBruBlog. Waxaan sugeynaa qeybta 3-aad! - David